Sida uu yahay jawiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sida uu yahay jawiga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Waxaa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka furmo shirka madaxda urur goboleedka IGAD, iyadoona shirkaasi looga hadli doonno arrimo aad u xasaasi ah.
Muddo saacad kahor ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde soo gaaray wafuud ka kooban wasiiro ka socda dalalka Jabuuti, Kenya iyo Uganda, waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Ammaanka garoonka Aadan Cadde ayaa ah mid aad loo adkeeyay, waxaana gudaha iyo banaanka garoonka lagu arkayaa ciidamo aad u hubeysan islamarkaana si aan caadi ahayn ammaanka u sugaaya.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa inuu magaalada Muqdisho soo gaaro madaxweynaha dalka Jabuuti Mr. Ismaaciil Cumar Geele, waxaana garoonka Aadan Cadde haatan ka socoto qaban-qaabada soo dhaweyntiisa.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan ku sugan garoonka Aadan Cadde, waxaana uu isku diyaarinayaa soo dhaweynta wufuuda madaxda shirka urur goboleedka IGAD oo maanta ka dhici doonno Hoteel ku yaala garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, shirkaasi ayaa socon doonno muddo saacado ah, waxaana shirkaasi kadib lasoo saari doonnaa waxyaabihii shirka looga hadlay.